Ionic vs Covalent Bonds - Fantaro ny fahasamihafana
Ny fahasamihafana eo anelanelan'ny bakteria simika sy kovalenta
Misy molekiola na fitambarana natao rehefa misy atôma roa na maromaro mifandray amina chimique , mampifandray azy ireo. Ny karazana fifamatorana roa dia fatorana ionika sy fifamatorana azo antoka. Ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo dia mifandray amin'ny fomba mitovy ny atôma mandray anjara amin'ny fifandraisana mizara ny elektronika.
Ao amin'ny fifamatorana misy ionika, atomika iray dia manome loharanom-bola elektronika mba hampiato ny atoma hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mandany ny ankamaroan'ny fotoana eo akaikin'ny atomôzôra ny elanelana.
Ireo atôma izay mandray anjara amin'ny fifamatorana misy ionika dia samy manana ny hasina maha-elektronika azy. Ny fifamatorana eo amin'ny polar dia mifototra amin'ny fisehoana eo anelanelan'ny iyon mifanohitra. Ohatra, ny sodium sy ny chloride dia manangana fatorana ionika , mba hahatonga ny NaCl, na ny sira . Azonao atao ny maminavina ny fifandraisan'ny ionika rehefa misy atôma roa samy manana ny soatoavina electronegativity ary mamantatra ny fiompiana ionika amin'ny toetrany, ka tafiditra ao anatin'izany ny firosoana hifehezana ny liona ao anaty rano.
Amin'ny fifamatorana kovalana, ny atôma dia voafatotry ny elektronika ifampizarana. Ao anatin'ny fifamatorana marina, ny soatoavina electronegativity dia mitovy (eg, H 2 , O 3 ), na dia eo amin'ny zava-misy aza dia tokony ho akaiky ny soatoavina electronegativity. Raha mifampizarana ny elanelana eo amin'ny atôma izay mamorona fifamatorana mivaivay , dia lazaina fa tsy mifanohitra ny fifandraisana. Amin'ny ankapobeny, ny electron dia mahasarika kokoa ny atomika mihoatra ny iray hafa, ka mamorona fifamatorana mibaribary. Ohatra, ny atôma ao anaty rano, H 2 O, dia miara-miasa amin'ny fatoram-bidy misy poizina.
Azonao atao ny maminavina fa misy fifandraisana eo anelanelan'ny atôma roa tsy metetika. Mety hijanona ao anaty rano ihany koa ny fitambaran-kovalana, fa aza misara-bazana.
Ionic vs Covalent Bonds famintinana
Ity misy famintinana fohy momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny fatorana ionic sy covalent, ny toetra sy ny fomba ahafantarana azy ireo:
Description Fifamatorana eo amin'ny metaly sy tsy metatra. Ny nonmetal dia manintona ny electron, noho izany dia toy ny metaly manome azy ny elektroniny. Fifandirana eo amin'ny tsy metisy roa miaraka amin'ny electronegativité toy izany. Ny atôma dia mizara ny elon-koditra ao amin'ny orbital ivelany.
Polarity avo Low
endrika Tsy misy endrika voafaritra Endrika voafaritra tsara
Melting Point avo Low
Boiling Point avo Low
Fanjakana ao amin'ny Room Temperature mafy Raiso na gazy
ohatra Chlorid Sodium (NaCl), Sulphuric Acid (H 2 SO 4 ) Methane (CH 4 ), asidoholo (HCl)
Karazan-tsakafo Metal sy nometal (tsarovy fa afaka manao zavatra ny orana) Two nonmetals
Azonao ve? Fantaro ny fahatakaranao amin'ity quiz ity.
Fitaovana Stone tamin'izany fotoana sy ankehitriny
Fampidirana ny matematika
Miaraka amin'ny Exposures, lahatsoratra iray
Inona no atao hoe muriatic Acid?
Huygens 'ny fitsipi-pitenenana
Synthesis Reaction definition sy ohatra
Mafana ny haavon'ny rivotra amin'ny kibay
Ny momba ny Muon
Ny fiheverana ny biôlôjia sy ny sifikso: end-na endo-
Ohatra tsotra fampiharana valiny fohy
Ny Fanjakana Mongola
Manao, milalao na mandeha amin'ny fanatanjahantena samihafa
Inona no atao hoe fiaramanidina evolisiona?
Fanatanjahantena Manchester University
Ady sefon'ny Amerikanina: Ny Trent Affair
Ny famoahana ny valala
Karazana ohatra maromaro avy amin'ny latabatry ny random chiffres
Aries sy Depression
Lisitry ny Song Manána tsara indrindra
Miresaka momba ny Andro Valentin Funny androany
Ahoana no fomba hivavahanao?
UNCSA, Oniversiten'i Caroline Avara-pahaizana momba ny Arts
Ohatra amin'ny angovo elektromagnetika
University of Tennessee ao amin'ny Chattanooga Admissions
Biography of Wilbur Wright, Mpisava lalana mpamonjy aina
Ny momba ny Pinocytosis sy ny fisotroana sela
Folo folo Classic O'Jays
Karazana roa amboaram-peo dihy
Ny fomba hanamboarana saha kristaly sira
CS Lewis sy Christian Allegory
5 Zavatra azonao ianarana avy amin'ny rakitra maty
101 Teny Fampidirana Mampahery ankizy iray
Lalàna momba ny fanandevozana
Manangana Anjara atao hoe Shrine - Altar razambe